Programmer's Diary: 2008
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 11:21 PM 11 comments
၈ နာရီခွဲကနေ ၆ နာရီ အထိ
မန်နေဂျာရဲ့ သေနတ်ပြောင်းဝရှေ့မှာ ရပ်
အာမခံချက် မရှိတဲ့ နေ့ရက်တွေထဲ။
ဒီနေ့လည်း မနေ့က အတိုင်း
ကမ္ဘာကြီးဟာ ဦးတည်ရာမဲ့ လည်နေသလိုလိုနဲ့ ရပ်တန့်နေ။
၀ယ်သူသက်သက် ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ဘူး
ပညာ၊ ဥစ္စာ၊ အောင်မြင်မှုရဲ့ တန်ရာတန်ဖိုးဟာ
ခင်ဗျား ဘယ်လောက်ပေးနိုင်သလဲဆိုတာနဲ့ စကားပြောတယ်
၀ယ်လိုအား ရောင်းလိုအား မမျှတဲ့ အနေအထားမှာ
လကုန်ရင် ၀င်လာမယ့် ကိန်းဂဏန်းတွေ
လကုန်ရင် ထွက်သွားမယ့် ကိန်းဂဏန်းတွေကို
တွက်ရချက်ရ တိုင်းရထွာရ ချိန်ရဆရ
တကယ်တော့ ငွေဆိုတာ အတ္တစက္ကူပါး တစ်မျိုးပဲ
ဘ၀ကတော့ ကာရန်လွဲနေတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပေါ့
လွဲနေတဲ့ကဗျာကိုချည်း တောက်လျှောက် ရွတ်နေမိခဲ့တယ်။
ညနေ ၄ နာရီ ၆ မိနစ်
၂၆ ရက် နိုဝင်ဘာလ၊ ၂၀၀၈
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 4:14 PM3comments
ဘလော့ဂါနေဘုန်းလတ်နဲ့ အခြားသောသူတွေကို ဒီရက်ပိုင်းမှာ ထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည်ချရာမှာ အဓိက အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဗီလိန်ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အီလက်ထရွန်းနစ် အက်ဥပဒေကို ဒီနေရာကနေ တဆင့် ရယူနိုင်ပါတယ်။
ဒီဥပဒေကို ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့မှာ စတင် ပြဌာန်းခဲ့တာပါ။
မရရအောင် လိုက်ရှာကာ တစ်ရွက်ချင်း အပင်ပန်းခံ scan ဖတ်ပြီး အီးမေးလ်နဲ့ တကူးတက ပို့ပေးတဲ့ “ ***** ” ကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 12:10 AM0comments
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 9:11 PM 11 comments
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 4:21 PM0comments
အိုဘားမားရဲ့ အောင်ပွဲသတင်းတွေ ပလူပျံနေတဲ့ သတင်းစာတွေဟာ အမေရိကမှာ ရောင်းမလောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ပြီး အကြိမ်ကြိမ် ပုံနှိပ်ခဲ့ရပါတယ်။ တချိန်မှာ နောင်လာနောက်သားတွေကို ပြဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သိမ်းထားချင်သူတွေက ဒုနဲ့ဒေးဆိုတော့ သတင်းစာတွေကို တန်းစီပြီး စောင့်ဝယ်ရတဲ့ အထိ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
The Sun, Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, USA Today, Chicago Tribune, Telegraph အစရှိတဲ့ နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်နေ့ထုတ် အမေရိကန်နဲ့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က သတင်းစာ မျက်နှာဖုံးတွေကို အမှတ်တရ သိမ်းထားလိုသူတွေ အောက်ပါ လင့်ခ်ကနေ တဆင့် သွားရောက် သိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 8:12 AM0comments
ကဏ္ဍ - Downloads, Obama, Tips
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 2:05 PM4comments
I smiled upon hearing when my sister in US told me what my nephew said to her when he woke up. Guess what? He said it's voting day for Obama. He's just started schooling by the way.
I read in news that kids from many elementary schools in US are allowed to cast their votes in mock election and Obama won landslide victory. :)
Technology has changed and make voting process not only for the adults also for the kids. And it's not limited to Americans. Online citizens took part and voted who their favourite US president candidate is on twitter.
I voted for Obama in Twitter Opinion-Poll. Takealook at how much Internet users favor Obama to become the president of United States.
You may visit to the following twitter site to cast your vote if you wish to.
For those who wanna follow US election news, follow twitter updates from the link below. It keeps on refreshing very quickly.
FYI, my twitter account is at http://twitter.com/nyinyithanlwin
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 3:18 AM0comments
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 5:38 PM0comments
စမ်းတ၀ါးဝါးနဲ့ ဟိုဝင်တိုက် ဒီဝင်တိုက်
ဘာလဲ.. မောလွန်းလို့ ဟိုက်နေသလား
မှောက်ထားတဲ့ ဖဲတစ်ချပ်ကို လှန်လိုက်တဲ့အခါ
မျှော်လင့်ထားသလို ဗလာမဲ ဖြစ်နေပြီး
ကံစမ်းမဲ တစ်ခုကို ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ
မျှော်လင့်ထားသလို စပိတ်တစ် ဖြစ်နေခဲ့
သံပရာသီးတွေ ချိုပြီး ပျားရည်တွေ ချဉ်သွားတဲ့အထိ
ဘ၀ဆိုတဲ့ အရသာကို ခံတွင်း မတွေ့မိသေးဘူး။
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 3:35 PM2comments
ထောင့်စုံအောင် မေးမယ့် မေးခွန်းတွေထက်
ဒီတော့ .... တစ်ခွန်းထဲ ရဲရဲ ပြောလိုက်ပါ
ငါ .......... အဖြေကို နားစွင့်ထားတယ်။
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 5:55 PM2comments
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 12:47 PM 1 comments
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 3:09 PM3comments
၂၀ + ၈ ဖြစ်ဖြစ်
၃၀ - ၂ ဖြစ်ဖြစ်
မျှော်လင့်ချက်အသစ်နဲ့အတူ ၂၈ ရောက်လာတယ်။
၁၉၈၀ ၁၀လပိုင်း ၇ ရက်နေ့ဟာ အင်္ဂါနေ့ ဖြစ်သလို
၂၀၀၈ ၁၀လပိုင်း ၇ ရက်နေ့ဟာ အင်္ဂါနေ့ ဖြစ်တယ်။
မိသားစုထဲ နောက်ဆုံးမှ ရောက်လာတဲ့ သားကို
ကျရှုံးတိုင်း နားလည်တတ်တဲ့ အဖေနဲ့ အမေ
အောင်မြင်တိုင်း ဂုဏ်ယူတတ်တဲ့ အဖေနဲ့ အမေ။
ဦးသုံးကြိမ်ချပြီး ခပ်မြန်မြန် ခတ်လိုက်တဲ့ မျက်တောင်တွေ အောက်
ငိုမဲ့မဲ့ဟန် မပေါက်အောင် ကြိုးစား..
"သား .. သွားတော့မယ်" လို့ နှုတ်ဆက်
စင်္ကာပူရဆိုတဲ့ ကျွန်းကလေးထဲ ၉ နှစ်တာ။
၉ နှစ်ကြာ ရှာတာတောင် အခြေချစရာ နေရာ စိတ်တိုင်းကျ မတွေ့
အရိုးများသလေး ချီးခါးသလေး ပြောတတ်တဲ့ သား
ကမ္ဘာတဘက်ခြမ်းမှာ ထပ်ရှာဖို့ ကြိုးစားမယ်။
ဒီလိုပဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဖြေသိမ့်
ကမ္ဘာဆိုတဲ့ လှောင်ချိုင့်ထဲ ၂၈ နှစ်တာ။
၇၊ ၁၀၊ ၂၀၀၈
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 12:05 AM 15 comments
အဲလ်ဘတ်ကမူးရေးတဲ့ စည်းအပြင်ကလူ (Outsider) အကြောင်းရေးမှာ မဟုတ်သလို ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ကိုဖြိုးရဲ့ စည်းအပြင်ကလူ ဆိုတဲ့ ဘလော့နဲ့လည်း မသက်ဆိုင်ပါဘူး။ လက်ရှိ အလုပ်က အကြောင်းအရာလေး တချို့ကို ရေးချင်တာပါ။ တခါက စီဘောက်စ်မှာ အလုပ်အကြောင်းတွေ ရေးပါလားဆိုပြီး တစ်ယောက်က အကြံပေးဘူးတယ်။ ရေးဖို့ စိတ်ကူးရှိခဲ့ပေမယ့် အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ မရေးဖြစ်ဘူး ဆိုပါတော့။
၂၀၀၇ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်မှာ ဒီအလုပ်ကို စ၀င်ခဲ့တော့ အခုဆို ဘာလိုလိုနဲ့ တစ်နှစ်ကျော် ရှိပါပြီ။ Job Title ကတော့ System Analyst ပေါ့။ ၆ နှစ်လောက် စင်္ကာပူမှာ အလုပ် လုပ်ဖူးခဲ့သမျှ အတွေ့အကြုံအရတော့ Software Developer ဖြစ်ဖြစ်၊ Software Engineer ဖြစ်ဖြစ်၊ System Analyst ဖြစ်ဖြစ် သံတူကြောင်းကွဲ အမည်သာကွဲပေမယ့် လုပ်ရတာကတော့ သိပ်မကွာလှပါဘူး။ လုပ်သက်များရင် ကုမ္ပဏီ ခပ်သေးသေးမှာ လုပ်တဲ့အခါ Senior ရာထူး ရတတ်ပြီး ကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာတော့ တော်ရုံနဲ့ Senior ပေးလေ့ မရှိပါဘူး။ အခုအလုပ်မှာလည်း စင်္ကာပူက အိုင်တီအလုပ်တို့ ထုံးစံအတိုင်း ကန်ထရိုက် (contract) နဲ့ လုပ်ရတာပါ။ အလုပ်မ၀င်ခင်ကတော့ ၆လ ကန်ထရိုက်မို့ မလုပ်ချင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အေးဂျင့်က ၆လလောက် လုပ်ပြီးရင် အမြဲတမ်းဝန်ထမ်း (Permanent Staff) ပြောင်းချင် ပြောင်းလိမ့်မယ်လို့ မက်လုံးပေးတာရယ် ရမယ့် လခက ကိုယ်မှန်းထားသလောက် ဖြစ်နေတာရယ်ကြောင့် ၀င်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ကျွန်တော့်ကို အင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့တဲ့ ပရောဂျတ်မန်နေဂျာနဲ့ကလည်း အတော်လေး အဆင်ပြေပါတယ်။ သူက မလေးရှားမှာ မွေးတဲ့ တရုတ်အမျိုးသားပါ။ ကျွန်တော်တို့က Client ရဲ့ ရုံးမှာ အဖွဲ့လိုက်လာပြီး လုပ်ရတာပါ။ ကျွန်တော်တို့လိုပဲ HP ၊ Accenture ၊ Avanade ၊ NCS စတဲ့ အခြား IT Vendor တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ပရောဂျတ် မန်နေဂျာကတော့ ကိုယ့်ကို ကန်ထရိုက်နဲ့ လုပ်နေတဲ့လူဆိုပြီး ခွဲခြား ဆက်ဆံတာမျိုး မရှိပါဘူး။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော်ရယ်၊ အဖွဲ့ထဲမှာ အတူ အလုပ်လုပ်တဲ့ အိန္ဒိယအမျိုးသမီး နှစ်ယောက်ရယ်က ကန်ထရိုက်နဲ့ လုပ်ကြတဲ့သူတွေပါ။ နောက်တော့ ပရောဂျတ် မန်နေဂျာက OCBC ဘဏ်ကို အလုပ်ပြောင်းသွားတယ်။ အတူ လုပ်ခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယအမျိုးသမီးကလည်း JP Morgan မှာ အမြဲတမ်းဝန်ထမ်း အနေနဲ့ အလုပ်ရသွားတော့ ပြောင်းသွားတယ်။
ပရောဂျတ် မန်နေဂျာအသစ်က အမျိုးသမီးပါ။ လူမှုရေးနားမလည်သလို အလိုက်ကန်းဆိုးလည်း မသိပါဘူး။ သူ့အတွက် အလုပ်ပြီးဖို့က လိုရင်းပါ။ တခြား ကိစ္စ တွေကို လူသားဆန်ဆန် သိပ်မတွေးပါဘူး။ သူရောက်လာပြီးကတည်းက တစ်ဖွဲ့လုံးဟာ အဖွဲ့ငယ်လေးတွေ ကွဲသွားတယ်။ ပရောဂျတ် မန်နေဂျာ အသစ်က စလုံး (စင်္ကာပူနိုင်ငံသား) ဆိုတော့ အခြား စလုံး အမျိုးသမီး နှစ်ယောက်နဲ့ပဲ အဖွဲ့ကျလေ့ရှိတယ်။ သူ ပြောင်းလာကာစက နေ့လည်စာကို တစ်ဖွဲ့လုံး အတူသွားစားကြတဲ့အခါ ဘာစကားမှ မပြောဘဲ ငြိမ်နေပါတယ်။ သူက ဘာမှ မပြောဘဲနေနေတော့ ကျန်တဲ့သူတွေက ဘာအသံမှ မထွက်တော့ဘူး။ ပြောင်းလာကာစ နည်းနည်းရှိန်နေသေးလို့လားလို့ ထင်မိပေမယ့် နောက်ပိုင်းလည်း အဲလိုပါပဲ။ ဒီလိုနဲ့ တစ်ဖွဲ့လုံးအတူ နေ့လည်စာ သွားစားတယ် ဆိုတာ အတော့်ကို နည်းသွားပြီး ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ် သွားစားဖြစ်တာ များလာတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ နေ့လည်စာကို ကျွန်တော်တို့နဲ့ ကုမ္ပဏီတူပေမယ့် အခြား အဖွဲ့တစ်ခုက အိန္ဒိယအမျိုးသား တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ပတ်ကို တစ်ခါ နှစ်ခါလောက် သွားစားဖြစ်တယ်။ သူကလည်း နိုင်ငံရေး စိတ်ပါတော့ သူနဲ့ နေ့လည်စာ အတူစားကြတဲ့အခါ စားရင်းသောက်ရင်း နိုင်ငံရေး အကြောင်းတွေ၊ ကမ္ဘာ့ရေးရာတွေချည်း ပြောနေမိတာပဲ များတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့မှာ ရှိတာမှ လူ ၇ ယောက်ထဲကို အိန္ဒိယအုပ်စု ၊ စလုံးအုပ်စုနဲ့ ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်း မြန်မာ ဆိုပြီး သုံးစု ကွဲသလို ဖြစ်လာတယ်။ အိန္ဒိယအမျိုးသား နှစ်ယောက်ကလည်း အားအားရှိ ဆေးလိပ်ဆင်းသောက်မယ် ဆိုတာချည်းပဲ။ ကျွန်တော့်မှာ ဆေးလိပ်လည်း မသောက်တတ် နေ့လည်စာလည်း အတူ ထွက်မစားဖြစ်ကြတော့ အလုပ်ကိစ္စက လွဲရင် စကားအပို မပြောဖြစ်တော့ဘူး။ တခါတခါ အလုပ်ပါးတဲ့ ရက်၊ ရေးထားတဲ့ ပရိုဂရမ်တွေကို User တွေ အဆင်ပြေမပြေ စစ်နေတုန်း စောင့်နေရတဲ့ရက်တွေမှာဆို မနက် ရုံးလာ၊ သတင်းဖတ်၊ အီးဘွတ်ခ်လေး ဘာလေးဖတ်၊ နေ့လည်စာ တစ်ယောက်တည်း သွားစား၊ ဘလော့ဂ်တွေ ဖတ်၊ ဘလော့ဂ်ရေး၊ ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်တာလေးတွေ လေ့လာစရာ ရှိတာ လေ့လာ၊ ညနေ အိမ်ပြန်နဲ့ တစ်နေ့လုံး ဘယ်သူနဲ့မှ စကားတစ်ခွန်းတောင် မပြောဖြစ်ဘူး။ ပရောဂျတ် မန်နေဂျာကလည်း လုပ်စရာရှိရင် အီးမေးလ် ပို့ထားသေးတယ်။ အဲဒီ အီးမေးလ်ကို မစစ်မိရင် သူခိုင်းထားတာကို မလုပ်သေးဘူးလား ဘာလုပ်နေလဲ ဆိုပြီး ရစ်ဦးမယ်။ အမှန်က သူထိုင်တဲ့ နေရာနဲ့ ကျွန်တော် ထိုင်တဲ့ နေရာက ၁ ကိုက်လောက်ပဲ ကွာမယ်။ အဲဒါကို လှမ်းပြောရင် ရသားနဲ့ မပြောဘူး။ ဒီအလုပ်မှာ လုပ်ရတာ အတော့်ကို စိတ်ပျက်မိတယ်။
အဲဒီလို စည်းအပြင်ကို ရောက်နေသလို ခံစားမိစေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုလည်း ရှိသေးတယ်။ အလုပ်ဝင်ပြီး ၄ လ လောက်အကြာမှာ ကျွန်တော့် မွေးနေ့ ရောက်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့မှာ တစ်ယောက်ယောက် မွေးနေ့ရှိတယ် ဆိုရင် မွေးနေ့ကတ်တစ်ခု အပေါ်မှာ အားလုံး ဆုတောင်းတွေ ရေး နာမည်တွေ ထိုးနဲ့ လုပ်လေ့ ရှိတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ကျွန်တော့်လိုပဲ အောက်တိုဘာထဲမှာ မွေးတဲ့သူ နှစ်ယောက်အတွက် ဆုတောင်း ရေးခိုင်းလို့ ရေးပေးခဲ့ရသေးတယ်။ သူများတွေအတွက် ဆုတောင်းတွေ ကတ်ပေါ်မှာ ရေးပေးခဲ့ရပေမယ့် ကျွန်တော့် မွေးနေ့မှာ ဘာတစ်ခုမှ မရခဲ့ဘူး။ ဘာလဲ။ ကန်ထရိုက်နဲ့ လုပ်တဲ့ လူမို့ ဒီလို လုပ်တာလား။ ဒီကတ်လေး တစ်ခု ပိုသုံးလိုက်လို့ သူတို့ ဘယ်လောက်များ ကုန်ကျသွားမလဲ။ စိတ်ထဲမှာတော့ ဒဏ်ရာ ခပ်ပြင်းပြင်း တစ်ခု ရလိုက်တယ်။ ဘာမှတော့ မပြောဖြစ်ဘူး။
အလုပ်မှာက အပတ်စဉ် ကြာသပတေးနေ့တိုင်း မနက် ၉ နာရီမှာ အဖွဲ့အစည်းအဝေးလုပ်တယ်။ အဖွဲ့ရဲ့ နည်းပညာပိုင်း ခေါင်းဆောင်က အလုပ်ကို အမြဲ နောက်ကျမှ လာတတ်တယ်။ ကြာသပတေးနေ့ လုပ်တဲ့ အစည်းအဝေးတွေမှာ တခြားသူတွေ အထူးသဖြင့် စလုံးတွေ မရောက်သေးရင် ၉ နာရီမှာ မစဘူး။ သူတို့ ရောက်မှ စတယ်။ နည်းပညာပိုင်း ခေါင်းဆောင် အိန္ဒိယအမျိုးသား နောက်ကျတဲ့အခါ ပရောဂျတ် မန်နေဂျာက မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်။ အဲ.. ကျွန်တော်များ နောက်ကျလို့ကတော့ အစည်းအဝေး မပြီးခင်မှာ "အခုတလော တချို့အဖွဲ့သားတွေ အလုပ်ကို နောက်ကျမှ လာတယ်။ အလုပ်ချိန်က ၈ နာရီခွဲ ဖြစ်လို့ အားလုံး အချိန်မီ ရောက်အောင် လာကြပါ" ဘာညာနဲ့ စောင်းမြောင်းပြီး ပြောတော့တာပဲ။ တခါကတော့ အမြင်ကတ်လို့ တစ်ပတ်လုံး ၈ နာရီခွဲ အတိ ရုံးရောက်အောင် သွားပစ်လိုက်တယ်။ ဘယ်သူမှဖြင့် မရောက်သေးဘဲနဲ့။ ပရောဂျတ် မန်နေဂျာက ၈ နာရီ ၄၀ .. ၄၅ မိနစ်လောက်မှ လာတယ်။ သူ မရောက်ခင် ကျွန်တော် ရောက်နေတာ သိသားပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘာမှ အသိအမှတ်ပြုတာမျိုး မလုပ်ဘူး။ ရတယ်လေ။ အဲဒီ နောက်ပိုင်း ကျွန်တော် ရုံးကို ကြာသပတေးနေ့က လွဲရင် အရင်ကအတိုင်းပဲ ၉ နာရီနဲ့ ၉ နာရီခွဲကြားပဲ ရောက်အောင် သွားတော့တယ်။ မကျေနပ်ဘူးလား။ မတတ်နိုင်ဘူး။ ဆောရီးပါပဲ။
အခု ပရောဂျတ် မန်နေဂျာ လက်အောက်မှာ လုပ်နေရတာ အာဏာရှင်လက်အောက်မှာ နေ နေရသလိုပဲ။ ဘယ်လိုလုပ်လုပ် အလုပ်ထဲ မပျော်ဘူး။ သူ ရုံးမလာတဲ့ နေ့ရက်မျိုး၊ သင်တန်းသွားတက်နေရတဲ့ နေ့ရက်မျိုးဆို တစ်ဖွဲ့လုံး ဖရီးရိုက်တော့တာပဲ။ စိတ်လည်း အတော်လေး ပေါ့ပါးတယ်။ ဒီ ပရောဂျတ် မန်နေဂျာရဲ့ ပြဿနာက မချီးကျူးတတ်တာပဲ။ ဘယ်လောက်ခက်ခဲတာ ဖြစ်ဖြစ် ဖြေရှင်းပေးလိုက်တဲ့အခါ သြော်.. အင်း အင်းနဲ့ မသိချင်ယောင်ဆောင်တတ်တယ်။ အမှားများ လုပ်မိလို့ကတော့ ပြောမဆုံးတော့ဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ လကလည်း ကျွန်တော့်ကို တာဝန်ပေးထားတဲ့ အလုပ်အပြင် တစ်ဖွဲ့လုံးက ရေးထားတဲ့ PL/SQL Script တွေကို ဆာဗာပေါ် မပြောင်းခင် စစ်ပေးပြီး ဘယ်မှာ မှားနေသလဲ ဆိုတာ ပြပေးတဲ့ Utility တစ်ခုကို ကျွန်တော် ထပ်ရေးရတယ်။ ခပ်လွယ်လွယ် မဟုတ်ဘူး။ အတော်လေး အားစိုက် ရေးခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာမှ appreciate မလုပ်လာဘူး။ လုပ်စရာ အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်တာ ဘာမှ ချီးမွမ်းစရာ မလိုဘူးထင်နေလား မပြောတတ်ဘူး။ ဟိုဟာလေး ထည့်ရင် ပိုကောင်းမယ် .. ဒီဟာလေး ထပ်လုပ်နိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ် လုပ်သေးတာ။ တခြား အလုပ်တွေ ပိနေတဲ့ မလုပ်နိုင်သယောင် မသိချင်ယောင်ဘဲ ဆောင်နေလိုက်တယ်။ လုပ်ပေးလည်း ဘာထူးဦးမှာလဲ။ လခရလို့ အလုပ် လုပ်နေတယ် ဆိုတာ မှန်ပေမယ့် စေတနာ မပါအောင် လုပ်တာ ကျွန်တော်မှ မဟုတ်ဘဲလေ။
အလုပ် ကန်ထရိုက် ၆လ ပြည့်ခါနီးတော့ မေးတယ်။ ငါ့ကို ထပ်တိုးမှာလား။ ဘယ်တော့ အမြဲတမ်းဝန်ထမ်း ပြောင်းပေးမလဲဆိုတော့ ပရိုဂရမ်မန်နေဂျာက နောက်ထပ် ၆ လ ထပ်တိုးပြီး ကြည့်တာပေါ့တဲ့။ ၁ နှစ် မပြည့်သေးဘဲ အမြဲတမ်းဝန်ထမ်း မပြောင်းချင်သေးဘူးဆိုတော့ အိုကေပေါ့။ တစ်နှစ်ပြည့်အောင်တော့ လုပ်လိုက်ဦးမယ် ဆိုပြီး ၆လ ထပ်တိုး လိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်နဲ့ အတူ အလုပ်လုပ်တဲ့ အိန္ဒိယအမျိုးသမီးက အမြဲတမ်းဝန်ထမ်း ဖြစ်သွားပြီ။ ဆိုတော့ ကျွန်တော် တစ်ဖွဲ့လုံးမှာ ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်း ကန်ထရိုက်နဲ့ လုပ်တဲ့သူပေါ့။ စည်းအပြင်မှာ ရောက်နေတာ သေချာနေပြီပေါ့လေ။ ကျွန်တော့် နောက် ၂ လ လောက် နောက်ကျပြီး အလုပ်ဝင်တဲ့ စလုံး အမျိုးသမီးကိုတော့ ဘယ်အချိန်က အမြဲတမ်း ၀န်ထမ်း ပြောင်းပေးလိုက်မှန်းတောင် မသိပါဘူး။ အဟား.. Foreign Talent ဆိုတော့ စိတ်က မလျော့သေးဘူး။ ကျွန်တော့်အလှည့်တော့ စောင့်ရဦးမှာပေါ့လေ။ အဲ.. ၁ နှစ် ပြည့်ပြန်တော့လည်း အမြဲတမ်းဝန်ထမ်း မပြောင်းသေးပြန်ဘူးတဲ့။ နောက်ထပ် ၆ လ ပဲ ထပ်တိုးမယ် လုပ်လာပြန်ရော။ ဒီတခါတော့ ပရောဂျတ်မန်နေဂျာရဲ့ စနက်ဆိုတော အတော်လေး သေချာသလောက် ရှိသွားပြီ။ သူ အကောင်းမပြောပေးလို့ကတော့ ပရိုဂရမ်မန်နေဂျာက ဘယ်လုပ်ပေးလိမ့်မလဲ။ အဲဒါနဲ့ အေးဂျင့်ကို အမြဲတမ်းဝန်ထမ်း ပြောင်းမပေးသေးတဲ့အတွက် လခ တိုးမပေးရင် ထွက်တော့မယ် ဘာညာ လုပ်တော့မှ လခ ၅ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတယ်။ ဟူး.. တကယ့်ကို မလွယ်ဘူး။ ထွက်မယ်။ ကန်ထရိုက် သက်တမ်းပြည့်ဖို့ကလည်း မကြာတော့ပါဘူး။ ၃ လ လောက်ပေါ့။ ဇန်န၀ါရီ ၁၀ ရက်ဆိုရင် ကန်ထရိုက်သက်တမ်းလည်း ပြည့် ကန်ထရိုက်ပြီးအောင် လုပ်တဲ့ ဘောနပ်စ်လေးယူပြီး အမြန်ဆုံး စလုံးက ခွာနိုင်အောင် ကြိုးစားတော့မယ်။ ဒီနေ့ဟာ မနေ့ကထက်တော့ တစ်ရက် ပိုနီးလာတာပဲလေ။
အောက်တိုဘာရောက်လာပြန်ပြီဆိုတော့ မနေ့ကပဲ မွေးနေ့ကတ် နှစ်ခုမှာ ဆုတောင်း ရေးပေးလိုက်တယ်။ မကြာခင် ရောက်တော့မယ့် ကျွန်တော့် မွေးနေ့အတွက်ရော ဒီတစ်နှစ်မှာတော့ ပေးလိမ့်မယ် ထင်သလား။ အဟား .. မစဉ်းစားတာဘဲ ကောင်းပါတယ်။ စည်းအပြင်မှာပဲ တိတ်တိတ်လေး ဘလော့ဂ်ရေးနေလိုက်တယ်။
ခုထိ .. အလင်းဆိုတဲ့ အရောင် မလက်သေးဘူး။
စိတ်မကောင်းပါဘူး ခုလို ကြားရတာ ၀မ်းသာပါတယ်
ကွယ်.. ဘ၀ဆိုတာ လမ်းတဲ့လား
အသံတိတ် ဖိနပ်ကို စီးရင်း။
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 12:19 PM 14 comments
ကဏ္ဍ - Blogger, Essays, Experience, My Poems, Poems, Singapore
ဒီစာအုပ်ဟာ ပထမမျိုးဆက် iPhone အတွက် ရေးထားတာ ဖြစ်လို့ 3G iPhone ကိုင်ဆောင်သူတွေ အတွက်တော့ အနည်းငယ်ကွဲလွဲနေပါလိမ့်မယ်။ 3G iPhone မှာ သုံးထားတဲ့ iPhone 2.0 software မှာ ကျွန်တော် သိသမျှ ထပ်တိုးလာတဲ့ Feature အသစ်တွေက ဖုန်းကို လှည့်လိုက်ရင် Calculator က Scientific Calculator ပြောင်းသွားတယ်။ ပြီးတော့ backspace ပါလာတယ်။ Push Mail ပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့် အီးမေးလ်ကို Microsoft Exchange Server နဲ့ Sync လုပ်လို့ ရတယ်။ Mobile Me ဆိုတာ ပါလာတယ်။ GPS ပါတယ်။ အရင်သုံးတဲ့ EDGE 2.5G (GPRS) အစား ပိုမြန်တဲ့ 3G (Broadband speed) ဖြစ်လာတယ်။ Apple account နဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေ ၀ယ်နိုင်၊ အလကား ဒေါင်းလုပ် လုပ်နိုင်တဲ့ App Store ပါလာတယ်။ ကျန်တဲ့ Feature တွေကတော့ အတူတူပါပဲ။
ဒီစာအုပ်မှာ iPhone ရဲ့ အခြေခံသုံးစွဲနိုင်ပုံတွေကို ရှင်းလင်းထားပါတယ်။ iPhone နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Tutorial တွေကို www.iClarified.com မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
iPhone for Dummies စာအုပ်ကို ဒီကနေ ရယူနိုင်ပါတယ်။
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 11:19 AM0comments
ကဏ္ဍ - Books, Downloads, iPhone, Tips
iPhone ရဲ့ အားသာချက်နှင့် အားနည်းချက်များ
3G iPhone လို့ ခေါ်ကြတဲ့ မကြာသေးမီကမှ ထုတ်ဝေလိုက်တဲ့ iPhone ဟာ မူလပထမ iPhone နည်းတူ Unlock လုပ်ထားပြီးရင်3G Support လုပ်သော မည်သည့် SIM Card နဲ့ မဆို သုံးလို့ ရပါတယ်။ iPhone ရဲ့ အားသာချက်တွေနဲ့ အားနည်းချက်တွေကို စာရင်းလုပ်ပေးထားပါတယ်။ တတ်သိနားလည်သူများ ထပ်မံဖြည့်စွက် အကြံပေးနိုင်ပါတယ်။
iPhone ရဲ့ အားသာချက်များ
- Touch Screen ဖြစ်ခြင်း
- Apple product တွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း သုံးစွဲရလွဲကူခြင်း
- Multi Touch Techonology ကို အသုံးပြုထားခြင်း ( ဓာတ်ပုံများကို လက်ချောင်း နှစ်ချောင်းဖြင့် ချုံ့နိုင် ချဲ့နိုင်ခြင်း)
- iPod တွဲလျက် ပါလာခြင်း
- iTunes မှ သီချင်းများ နားထောင်နိုင်ခြင်း
- Pod Cast များကို စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် ထည့်သွင်းနိုင်ခြင်း ( ဥပမာ- iTunes U မှ Lecture များ၊ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများ၊ Pod Cast ရေဒီယို အစီအစဉ်များ စသဖြင့်)
- Wi-Fi အသုံးပြုနိုင်သဖြင့် Wireless Hot Spot ရှိသည့် မည်သည့်နေရာတွင် မဆို အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
- Jailbreak လုပ်ပြီး သုံးစွဲပါက အခြားသော အသုံးဝင်သည့် application များကို အခမဲ့ Install လုပ်နိုင်ခြင်း (ဥပမာ - Dictionary, eBook Reader, RSS Reader, S'pore Bus Guide, YouTube Video များ Download လုပ်နိုင်သည့် MxTube)
- Google Map ဖြင့် နေရာ ဒေသများ ကြည့်နိုင်ခြင်း ( 3G iPhone ကို အသုံးပြုပါက မိမိရောက်နေသည့် နေရာကို GPS မှ တဆင့် ကြည့်နိုင်ခြင်း)
- You Tube မှ ဗီဒီယိုများအား ကြည့်နိုင်ခြင်း
- Theme ပြောင်းနိုင်ခြင်း (မူလထက် ပိုမို ကောင်းမွန်သည့် Theme များ ပြောင်းလဲပြီး မိမိ စိတ်ကြိုက် Customized လုပ်နိုင်ခြင်း)
- Video Call ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း (3G iPhone အတွက်သာ)
- Gtalk ဖြင့် Chat နိုင်ခြင်း ( Fring ဟု ခေါ်သည့် ဆော့ဝဲလ်ကို သီးခြား သွင်းရန် လိုသည်)
- Apple App Store မှ လိုချင်သည့် Application များကို ၀ယ်ယူ ထည့်သွင်းနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် အခမဲ့ သွင်းနိုင်ခြင်း ( version 2.0 အသုံးပြုသည့် iPhone အတွက်သာ)
iPhone ရဲ့ အားနည်းချက်များ
- 2.5G EDGE Technology ကို အသုံးပြုထားသဖြင့် GPRS Network များတွင် အင်တာနက် အသုံးပြုပါက အလွန် နှေးကွေးခြင်း ( 3G iPhone ကို အသုံးပြုလျှင်တော့ Wi-Fi Speed နီးပါး အင်တာနက်ကို လျင်မြန်စွာ သုံးနိုင်သည်)
-2mega pixel ကင်မရာသာ ပါခြင်း
- ကင်မရာတွင် Zoom မပါခြင်း ( Zoom ပါသည့် ဆော့ဝဲလ်ကို သီးခြား သွင်းရန်လိုသည်)
- ရေဒီယို နားထောင်၍ မရခြင်း
- ဗီဒီယို ရိုက်ကူး၍ မရခြင်း ( Video ရိုက်နိုင်သည့် ဆော့ဝဲလ်ကို သီးခြား သွင်းရန်လိုသည်)
- အီးမေးလ်များကို ဖျက်လိုလျှင် တစ်ခုစီ ဖျက်နေရခြင်း
- Zawgyi Font Support မလုပ်သဖြင့် ဇော်ဂျီဖြင့် ရေးထားသည့် အင်တာနက်စာမျက်နှာများ၊ ဘလော့များကို ဖတ်လျှင် လေးထောင့်စာလုံးများသာ မြင်နေရခြင်း
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 11:41 PM4comments
တကယ်တမ်း ကဗျာ.. ။
လူ့ဘ၀ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်ထဲ ထားလို့ဖြစ်တယ်။
ခေါင်းစဉ် ဘယ်လိုမှ တပ်မရတဲ့အခါ
ဘ၀ထဲမှာက တကယ်တမ်း ဗလာ
ရင်ဘတ်ထဲမှာက တကယ်တမ်း ကဗျာ.. ။ ။
မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ၂၀ မိနစ်
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 2:24 PM0comments
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 12:04 AM 1 comments
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 11:11 AM5comments
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 11:38 PM2comments
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 4:33 PM2comments